प्रभु लाइफको साधारण सभा सम्पन्न, अब आईपीओ निष्कासनको अन्तिम तयारी - Aarthiknews
मंगलबार, ०४ कार्तिक २०७७ Tuesday, 20 October, 2020
प्रभु लाइफको साधारण सभा सम्पन्न, अब आईपीओ निष्कासनको अन्तिम तयारी
विहीबार, २९ असोज २०७७
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले तेस्रो वार्र्षिक साधारण सभा असोज २९ गते बिहीवार सम्पन्न गरेको छ । यस कम्पनीले दशै अघिनै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको हो । कम्पनीका अध्यक्ष आत्माराम घिमिरेले सभा समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
हाल यस कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७४ साल मंसिर २८ गतेदेखि नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ६० लाख कित्ता आईपीओ विक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।
आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा असोज १४ गते निवेदन दर्ता गराएको छ । आईपीओ पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । बीमा समितिबाट सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गरी २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्ने गरि यस कम्पनीले कारोबार सञ्चालनको स्वीकृति पाएको थियो । यस कम्पनीले आईपीओको रेटिङ समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । कम्पनीको आईपीओ इक्रा नेपालले मध्यम जोखिमको संकेत गर्ने “इक्रा आइआर बीबी प्लस” रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
यस कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासमा ४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । त्यस अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको छ भने बीमा कोषमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
समीट लघुवित्तको शेयर कारोबार फुकुवा
गुराँस लाइफको साधारण सभा मंसिर ४ गते, लाभांशमा के दिँदै छ ?
हाइड्रो पावरको शेयरमा लगानीकर्ता झुम्मिए
सिटिजन्स बैंकद्वारा लाभांश दिने घोषणा
पाँच ब्रोकर कम्पनीको मार्जिन कारोबार सुविधा अनुमति खारेज
सिभिल लघुवित्तको लिलामी शेयर भर्ने अवधि सकियो
‘‘संक्रमणबाट ठिक भएकाहरुमा २ देखि ३ महिनासम्म लक्षण देखिन्छ’
जसले महामारीमा पनि १.४ ट्रिलियन डलर थप सम्पत्ति आर्जन गरे
अत्यावश्यक नभई घरबाहिर ननिस्कन काठमाडौं प्रशासनको अनुरोध
पाँच दिन बैंकका कुनै शाखा नखुल्ने
दुई दिनदेखि बेपत्ता प्रहरी जवानको शव नदी भित्र गाडेको अबस्थामा फेला
वाग्मती प्रदेशमा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना यस्तो आयो
आज राति मृगशिरा उल्का वर्षा, के हो उल्का वर्षा ?
२०२१ मा हुने ओलम्पिक्समा साइबर हमला
राजदूतमा सिफारिस खतिवडा र रेग्मी विरुद्ध उजुरी, दुबैले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप
टिकटकको पोष्ट पाकिस्तानले प्रतिबन्ध गरेपछि देशै बहिस्कार
विभिन्न सरकारी कर्मचारी सरुवा, को कुन मन्त्रालय पुगे ?
कोरोना बीमा : बिमितले तत्काल यो सुविधा नपाउने
अब ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिलालाई पनि भत्ता
६० वटा चलचित्र दराजमा थन्किए, ३ लाखको रोजगारी गुम्यो
बजार घटेपनि कारोबार उच्च